Ukupakisha nokuhleleka - iPandawill Technology Co., Ltd
Uyemukelwa kuwebhusayithi yethu.
Umbono & Injongo
Isikhathi Sokuthenga ne-FAQ
Ibhokisi Yakha & Umhlangano Wemishini
I-Quick Turn Prototype
Umthamo omncane / ophakathi / ophezulu
Ukupakisha & Logistic
1 & 2 Ungqimba PCB
I-Radio Frequency PCB
Ngesandla Esiqinile-flex PCB
Amandla we-PCB Design
Amandla Wokukhiqiza we-PCB
PCB Assembly Amandla
Ikhwalithi ye-PCB Fabrication
Ikhwalithi ye-PCB Assembly
EPandawill, wonke amabhodi azovalwa acace, abonakale ezikhwameni zokuhlanza ngaphandle kokufaka okuqukethwe kunoma yikuphi ukushisa okuqhubekayo, nangendlela lapho ukupakisha kungavulwa khona ngaphandle kobunzima obuphathekayo kumapaneli angaphakathi.
Kunezinzuzo eziningana zale ndlela yokupakisha:
✓Ukupakisha kucace bha-khulu ngakho-ke kungenzeka ukuthi uhlole noma ubuke ibhodi ngokuningiliziwe ngaphandle kokuqaqa iphakethe futhi ubeke amabhodi ukuthi aqhubeke nokuphatha noma ukuwabeka ekungcoleni nasemswakeni.
✓Izikhwama zingavulwa kalula ngesikele noma ngebhleji kunokuba ziklebhuke, kuthi uma sekugqekeziwe umshini, okufakwayo kukhululeke futhi amabhodi angasuswa ngaphandle kwengozi yokwehliswa amandla noma ukulimala.
✓Izikhwama eziqukethe amapaneli zingaphinde zisetshenziselwe ukuvala ubuningi bezingxenye, ngaleyo ndlela kwandise impilo yeshalofu lokuqukethwe.
✓Le ndlela yokupakisha ayidingi ukushisa njengoba izikhwama zivalwa ngokufakwa ngakho-ke amabhodi awabhekelwa izinqubo ezishisayo ezingadingekile.
✓Ngokuhambisana nokuzibophezela kwethu kwe-ISO14001 kwezemvelo, ukupakisha kungaphinda kusetshenziswe, kubuyiswe noma ku-100% kusetshenziswe kabusha.
Kunezinketho eziningi zokuthumela kuwe kuncike kuzindleko, isikhathi nevolumu.
Nge-Express: njengomthekisi omkhulu, sisungule ubudlelwano obuhle nezinkampani ezizwakalayo. Lokhu ikakhulukazi ivolumu encane, isikhathi imikhiqizo ebucayi. Ngaphandle kwe-akhawunti yethu yokuthumela, singayithumela nge-akhawunti yakho.
Nge-Air kuyonga uma kuqhathaniswa ne-express futhi kuyashesha ukwedlula olwandle. Imvamisa ngemikhiqizo yevolumu ephakathi.
Imvamisa ukukhiqizwa kwevolumu enkulu nesikhathi sokuhola akuphuthumi kangako. Futhi kuyindlela ebiza kakhulu yokulethwa.
ifoni 0755 2790 0595
ikheli R1605 Baoyunda Logistic R & D Centre Xixiang Street, Bao'an District Shenzhen, China 518102
ibhokisi leposi sales@pandawillcircuits.com